ကနောင်သားလေး: တပ်မတော်သား(၃) ဦး လုပ်ဆောင်သည်ဟု သံသယရှိသည့် ပြည်မြို့ လူသတ်မှုမှ ပေးသော သင်ခန်းစာ Pages
လူတိုင်းသည်သတင်းစာဖတ်သင့် သည်သတင်းစာဖတ်မှနိုင်ငံရေး-ဘာသာရေး-စီးပွားရေး-လူမူ့ ရေး-ကျန်းမာရေး-အသိပညာ-အတတ်ပညာတိုးပွားလာမည်--mailလိပ်စာ exitzone1@gmail.com ဖြင့် လာရောက်အဆွေခင်ပွန်းဖွဲ့ နိုင်ပါသည်..ကနောင်သားလေးဘာမထီဇင်အောင်မှ လာရောက် လေ့လာသော သူငယ်ချင်း မိတ်ဆွေများကို အစဉ် ရိုသေလေးစားနေရင်း အားလုံးကို မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ .
တပ်မတော်သား(၃) ဦး လုပ်ဆောင်သည်ဟု သံသယရှိသည့် ပြည်မြို့ လူသတ်မှုမှ ပေးသော သင်ခန်းစာ Email ThisBlogThis!Share to TwitterShare to Facebook
ပြည်မြို့ န၀ဒေးတံတား အနီးတွင် တပ်မတော်သား(၃) ဦးမှ လူသတ်မှုကျူးလွန် ဆိုသည့် သတင်းကို The Voice တွင် ဖတ်လိုက်ရသည်။ သတင်းဖြစ်စဉ်မှာ သမီးရည်းစား နှစ်ဦး န၀ဒေး တံတားအနီး သဲသောင်ပြင် တွင် ချိန်းတွေ့နေစဉ် လူ(၃) ဦးမှ ရောက်လာပြီး မီးခြစ်ရှိလား မေးကာ နောက်မှ သိုင်းဖက်ပြီး ထိုးကြိတ်ကာ လု ယက် ခြင်း ဖြစ်သည်။ အဆိုပါ လုယက်မှုတွင် စုံတွဲမှ အမျိုးသား သေဆုံးပြီး အမျိုးသမီးမှာ ဆေးရုံ တက်ေ ရာက် နေရ ကြောင်း ကျန်ရစ်သူ စုံတွဲမှ
အမျိုးသမီး အသက် ၂၇ နှစ် အရွယ် မအိဇင်မိုးကိုမှ ပြောပြ ခဲ့ သည်။ လုယက်သူတွေ ကို ဖမ်းမိပုံမှာ သေချင်ယောင်ဆောင်ခဲ့သည့် အမျိုးသမီး အကူအညီ တောင်း မှုကြောင့် အနီးနားရှိ ပြည်သူများ ၀ိုင်းရှာရာမှ မသင်္ကာဖွယ် ကိုင်းတောထဲမှ တက်လာသည့် လူ(၂)ဦးကို ဖမ်း မိ သည်။ တပ်မတော်သားများ ဖြစ်နေ သည့်အတွက် သက်ဆိုင်ရာ တပ်ရင်း အရာရှိထံ စနစ်တကျ လွှဲပြောင်း ပေးခဲ့သည်။
လူပြတ်သည့် နေရာ၊ မှောင်မိုက်သည့် နေရာများတွင် ချိန်းတွေ့ကြသည့် သမီးရည်းစား စုံတွဲများအား အုပ်စု ဖွဲ့ လုယက်သူများ မုဒိန်းကျင့်၊ လူသတ် ၊ ပစ္စည်းလုယူမှုများ အကြိမ်ကြိမ် ဖြစ်ဖူးသည်။ ရန်ကုန် မြို့တော်တွင် ပင် ဖြစ်ခဲ့ဖူးသည်။ သို့သော် ယခု အမှုတွင် တပ်မတော်သားများ ပါဝင်ပတ်သက်နေသည့် အတွက် ထိုအမှု သည် သာမန်လူသတ်မှုမျိုး မဟုတ်တော့။ ကြွေးကြော်သံများ၊ ဆူပူမှုများ နှင့် တပ်မတော်၏ ဂုဏ်သိက္ခာကို ကျ ဆင်း စေမှုများ ဖြစ်ပေါ်လာသည်။
ထိုသို့သော အခြေအနေများ အတွက် တပ်မတော်မှ အရာရှိကြီးများ ဖြစ်သည့် ဒုတိယ ဗိုလ်မှူးကြီး နေဝင်း (ခုံ ရုံး ဥက္ကဌ)၊ ဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီး ကျော်စွာမောင်တို့နှင့် အတူ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦး ဝင်းမြင့်၊ အမျိုးသားလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဒေါက်တာ မောင်မောင်လေး တို့ အသတ်ခံရသည့် လူ၏ မိ သား စုကို သွားရောက်တွေ့ဆုံခဲ့သည်။ အမှုမှန် ပေါ်ပေါက်ရေး၊ ထိရောက်သည့် အရေးယူမှုတို့အတွက် တိ တိ ကျကျ လုပ် ဆောင်မည်ဟု ကတိလာပေးသည့် အလားပင် ဖြစ်သည်။
လွန်ခဲ့သည့် နှစ်များက ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် တပည့်မကောင်း ဆရာ့ခေါင်း ပြစ်မှုများအတွက် တပ်မတော်မှ တာ ၀န်ရှိ သူများသည် ထိခိုက်နစ်နာသူများ ထံသို့
လိုက်လံဖြေရှင်း တောင်းပန်ခဲ့ဖူးသည်။ သို့သော် မီဒီယာ ထက် မရောက်။ အခြေအနေ
အချိန်အခါ အရလည်း မရောက်စေချင်ကြ။ အဘယ်ကြောင့် ဆိုသော် အောက်ခြေ အဆင့် ရဲဘော်တစ်ဦး ဖြစ်သည့် ပြဿနာသည် ၄င်း တစ်ယောက်တည်း အရေးယူယုံဖြင့် မပြီး။ အပြစ်ကျူးလွန် သူအား အရပ်ဘက် ဥပဒေ၊ စစ်ဘက် ဥပဒေတို့ဖြင့် အရေးယူယုံမက အဆင့်ဆင့် တာ ၀န်ရှိ သူများကို အရေးယူ သည်။ တပ်မတော်သား တစ်ဦး အမှုဖြစ်လျှင်
စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး ခုံရုံးဖွဲ့သည်။ အရာ ရှိကြီး အဆင့်ဆင့်ဖြင့် တိကျ သည့် အချက်များ စုဆောင်းရသည်။ ပြင်းထန်စွာ အရေးယူရသည်။ မည် သူမျှ တပ်မတော် အက်ဥပဒေ၏ အထက် တွင် မရှိခဲ့ပါ။
ယခု ဖြစ်စဉ်တွင်တော့ ထိုကဲ့သို့ လုပ်ဆောင်ချက်များ အား မီဒီယာမှ တစ်ဆင့် ပြည်သူ သိနိုင်ပြီ ဖြစ်သည်။ တပ် မတော် သားတိုင်းသည် ပြည်သူလူထုနှင့် ယဉ်ကျေးစွာ ဆက်ဆံရမည်မှာ စစ်သည်တော် ကျင့်ဝတ် တွင် ပါပြီး ဖြစ်သည်။ ခေတ်အဆက်ဆက်လည်း ကျင့်သုံးခဲ့သည်။ တပ်မတော်သား တစ်ဦးတစ်ယောက်၏ လုပ် ဆောင်ချက် မှားယွင်းမှုများ အတွက် ပြည်သူတို့ တိုင်ကြားနိုင်ပါသည်။ ထိရောက်စွာ အရေးယူပေးရန် တောင်း ဆိုနိုင်ပါသည်။ သို့သော် တပ်မတော်သားတိုင်းသည် ပြည်သူ့အင်အားသာ ဖြစ်သည်ကိုလည်း သတိပြုစေ ချင်ပါ သည်။
မီဒီယာသည် ဖွရန် မဟုတ်ပါ။ အစိုးရ၊ ပြည်သူ၊ တပ်မတော် ဆိုသည့် နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ၏ မရှိမဖြစ် လိုအပ် သည့် အင်အားစု (၃) ရပ်အကြား မဏ္ဍိုင်တစ်ရပ် အနေဖြင့် ထောက်ကူပေးရန်သာ လိုအပ်ပါသည်။ သို့မ ဟုတ် ပါက ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအတွက် စတုတ္တတိုင် မလိုပါဟု ပြောယုံမှ တစ်ပါး အခြားမရှိတော့ပါ။
ငြိမ်းစိုးဦးApril 26, 2013 at 4:46 AMတပ်မတော်သားတိုင်းသည် ပြည်သူ့အင်အား ဖြစ်ပြီး ပြည်သူလူထုနှင့် ယဉ်ကျေးစွာ ဆက်ဆံရမည်မှာ စစ်သည်တော် ကျင့်ဝတ် တွင် ပါပြီး ဖြစ်သည် ။ ဥပဒေ၏ အထက် တွင် မည်သူမျှ မရှိမှသာ တရားဥပဒေစိုးမိုးမှု ရှိမည်လည်း ဖြစ်ပါသည် ။ReplyDeleteAdd commentLoad more...
1.9.2012 မှ စ၍မှတ်တမ်းတင်ထားပါသည်။
ဘာသာရေး အသိစာပေများ လေ့လာရန်
"မွတ်ဆလင်ရောင်းတဲ့ အစာကုိုစားလျှင် မြန်မာတွေအပြစ်ဖြစ်ခြင်း၏ ဇစ်မြစ်"
Androidဖုန်းသမားများအတွက်ဖုန်းထဲတွင် ကနောင်သားလေး၏ Apk ကိုထည့်၍သတင်းနှင့်ဗဟုသုတများကိုဖတ်လို့ရပါပြီခင်ဗျာ.
ဟာသ ပုံလေးများ သူငယ်ချင်းတို့အတွက်နော်
သေပြီဆရာ တကယ်မမြင်တာပါအကိုတို့ရယ် ခွင့်လွှတ်ပါနော် အားလုံးပဲရယ်မောရင်းနဲ့အသက်ရှည်ကြပါစေလို့ရည်ရွယ်ကာ အင်တာနက်ပေါ်မှ စိတ်ဝင်စားဖွင်ဟာသ ပံ...
"ဆိုတေးဇနီး ဝင့်ကုဋေသူ အတွက် ငိုခဲ့ရတဲ့ ဝိုင်းစုခိုင်သိန်း"
ဝိုင်းစုခိုင်သိန်းက သူရဲ့ စုံတွဲ အခွေ အတွက် ဇူလိုင်လ ၁ဝ ရက်နေ့ ကဆိုတေးနဲ့ အတူ Pro Music Studio မှာ တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။ ဆိုတေးရဲ့ ဇနီး...
အမှန်တရားကို သိသွားတဲ့အတွက် ဖွတဲ့သူက အလိုလို မြောင်းထဲရောက်သွားတာပဲ ဆိုတဲ့ ရွှေမှုံရတီ
“ဒီလို အသက်အရွယ်လေးနဲ့ ဒီဇာတ်ဝင်ခန်းမျိုးကို ရိုက်ရလား” ဆိုတဲ့ စကားသံမျိုး၊ “ဒီဇာတ်ဝင်ခန်းကို အသေးစိတ် မရိုက်ပြဘဲ ရိုက်နေကျ ပုံစံ...
အောက်မှာရှိသေးတယ်နော်>>>> ဟာသပုံများ... ရယ်မောခြင်းသည်အသက်ရှည်၏
အမိုက်စား ရုပ်ရှင် ကြည့်ချင်သူများအတွက်
သွင်ရုပ်ရှင်ရုံ-အမိုက်စား (16,8,2013) ရက်မှစတင်၍ အဆင့်မြင့်ရုပ်ရှင်ရုံကြီးများတွင် ပြသနေသည့် ဇာတ်ကားများ ပွဲချိန်သတိပြု - ၁၀း၀၀ နာ...
လေးဖြူ ချစ်သူများအတွက် ဒိုင်ယာရီ လာပြီဗျို့
အားလုံးပဲမျှော်နေမယ်ဆိုတာသိပါတယ် 2013 October 27 ရက်နေ့တွင်စတင် နားဆင်နိုင်ပါပြီခင်ဗျာ Myanmar music store မှာလဲဝယ်ယူအားပေးနိုင်ပြါ...
သံလျှင် GTC က စုံတွဲ လူငယ်ဆိုတာ အမှားနဲ့ မကင်းပါဘူး။ အတင်းအဖျင်း ပြော သူတွေ ရပ်တန်းက ရပ်နိုင်ကြပါစေ။ သန်လျင်နည်းပညာတက္ကသိုလ်မှ ကျောင်း သားနှင့် ကျောင်းသူ...
ကျောက်ချဉ် အစွမ်းနဲ့ အမျိုးသမီးများ ကျန်းမာရေး အမျိုးသမီး တွေဟာ အမျိုးသား တွေထက် ကျန်မာရေး ကိစ္စမှာ ၀န်ပိုတွေ ရှိကြပါတ...
ကနောင်သားလေး မှ အထူးမေတ္တာရပ်ခံချက်
https://www.facebook.com/ExitZoneKanaungtharlay?ref=hl အားလုံးကို အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါသည် ။ က နောင်သားလေး
THAI LAND မှာအရေးပေါ်ဆက်သွယ်ရန်
ဖေ့စ်ဘုတ်တွင်ဝင်ရောက်ဖတ်ရန် Like လုပ်သွားပါနော်
နေ့ စဉ်ရေးသားရှာဖွေတင်ထားသမျှပို့ စ်များဖြစ်၍နှစ်သက်ရာကလစ်၍ဖတ်ပါ
လက်ရှိသင့် Ip လိပ်စာ
နိုင်ငံတကာ သတင်းရေးနေ သူများ
၂၇ ကြိမ်မြောက် အရှေ့ တောင်အာရှ မြန်မာနိုင်ငံ၏ အိမ်ရှင်ဆီးဂိမ်းပုံရိပ်များ နိုင်ငံခြားရောက်မြန်မာများအမှတ်တယကြည့် ရန်။
[ TheFraternity Of Myanmar.]
အိန္ဒိယနိုင်ငံ ရေပိုင်နက်ထဲကို ဝင်ရောက်ကျူးကျော် ငါးဖမ်းမူနဲ့ ရေလုပ်သား ၁၂၃ ယောက် ဒီကနေ့ နေ့လည်ပိုင်းက ရန်ကုန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေဆိပ်ကို ပြန်လည်ရောက်ရှိ
မလေးရှားနိုင်ငံမှာအင်တာနက်ကို အလကားလောက်နီးနီးဖရီးသုံးကြရအောင် (1 GB -1RM) (2am to 7am)
GooglePlayStore က ဖိုင်တွေကို PC ကနေ တိုက်ရိုက်ဒေါင်းနည်း ( Software မလို )...
ငယ်ငယ်က ဇွတ်တရွတ်လုပ်ခဲ့တာမျိုး ရှိကောင်းရှိမယ် ဆိုတဲ့ န၀ရတ်
ရှမ်းပြည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှ မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့် ချဲထီးလောင်းကစား ဖမ်းဆီးရမိမှု
YGN Young Satan Free Rap ( Young Htet , Zin Htet , Mg Z , Yanlay , Minus , Nga Khant , Moe Htet )
အွန်လိုင်းမြန်မာ I.T ဝါသနာရှင်များ
ဆွေမျိုးမေ့သွားမဲ့ Android Game လန်းလန်းလေး Wipeout v1.2 [PREMIUM] [ခိုးပြီးသား] [33MB]
27th SEA Games ဖွင့်ပွဲ
ဖုန်းလာရင် မီး နဲ့ အချက်ပြပေးမယ့် LEDBlinker Notifications v5.5.5 Apk
VSO Blu-ray Converter Ultimate 3.0.0.24 Beta Final
Backup Text for Viber v.0.9.5 APK (Viber က message တွေကိုသိမ်းထားမယ်)
"HTML 5" အခြေခံ Video သင်ခန်းစာများ Download